NFC ကို ဘာအတွက်သုံးနိုင်မလဲ?? – DigitalTimes
NFC ကို ဘာအတွက်သုံးနိုင်မလဲ??
သူနဲ့သာဆိုရင် ဖုန်းနံပါတ်ပို့ချင်ရင်ဘာဂဏန်းမှတောင်ရိုက်နေစရာမလိုပါဘူး။ contact/ address book ကနေ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ contact ကိုထောက်ပြီး တခြားဖုန်းပေါ်မှာ ကိုယ့်ဖုန်းလေးတင်၊ “touch to beam” ဆိုတာပေါ်လာရင် display ကို နှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
ကိုယ့်ဘေးနားကတစ်ယောက်ကို ပုံပေးပို့ချင်ရင် ဖုန်းလေးကိုသာကပ်ပေးလိုက်ပါ။ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။
၃. ဖိုင် document များ ပေးပို့နိုင်ခြင်း
ကိုယ်ဖတ်နေတဲ့ PDF ဖိုင်ကိုပို့ချင်ရင်တော့ Android Beam ကိုသုံးရပါမယ်။ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ဖိုင်ကိုရှာပြီး hamburger icon (အစက်သုံးစက် menu) လေးကနေ share ကိုနှိပ် ပြီးရင် Android Beam ကိုရွေးပြီးမှ ဖုန်း၂လုံးကပ်ပို့လိုက်ပါ။
၄. ကိုယ့်အကြိုက် app ကိုညွှန်ပေးနိုင်ခြင်း
ကိုယ့်အကြိုက် app လေးကိုသုံးနေတဲ့အချိန်မှာ တခြားတလုံးက ဒီ app ကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်လုံးကိ app ကိုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်မယ့် Google Play page ကို တိုက်ရိုက်ညွှန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို လမ်းကြောင်းပြောပြချင်တယ် ဒါပေမယ့် ရှင်းရခက်နေတယ်ဆိုရင် location ထောက်ပြီး ဖုန်း၂လုံးကပ်လိုက်တာနဲ့ Google Maps ကိုသုံးပြီး ဒီဘက်က direction ကိုပြပေးပါလိမ့်မယ်။
၆. သူများဖုန်းထဲမှာ app သွားဖွင့်နိုင်ခြင်း
App တစ်ခုသုံးနေတယ် ဒါမှမဟုတ် game တစ်ခုဆော့နေတဲ့အချိန် သူများဖုန်းမှာလည်း အဲဒီ app/ game ရှိနေတယ်ဆိုရင် သူတို့အတွက် ကိုယ်ကဖွင့်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်က Google Photos ကနေ ပုံတွေကိုကြည့်နေတယ် သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ကိုယ့်ဖုန်းထဲကသူတို့ပုံတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆို ဝိုင်းအုံကြည့်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ သူတို့ဆီလှမ်းဖွင့်ပေးလို့ရမှာပါ။
NFC နဲ့ဆို မိုဘိုင်းလ်ငွေပေးချေမှုတွေလည်း လုပ်နိုင်ပါမယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ မရသေးပေမယ့် နောင်မကြာသေးခင်အလားအလာရှိတဲ့အတွက် အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့ NFC က အသုံးဝင်လာတော့မှာပါ။
၈. NFC tag တွေနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း
NFC chips တွေမှာ NFC “tag” ဒါမှမဟုတ် sticker လေးတွေက ကိုယ့်စမတ်ဖုန်းဆီကို information မျိုးစုံပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ NFC tag တွေမှာ web address ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့လင့်တွေပါပြီး တချို့action တွေဥပမာ Wi-Fi ဖွင့်တာတွေ ringtone အသံလျှော့ချတာတွေလည်း လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိ QR နည်းပညာထက် NFC ကသာတဲ့အချက်က ဘာ “scanner app” မှမလိုဘဲ ချက်ချင်းအချက်အလက်တွေရနိုင်တာပါ။
နောင်မှာတော့ ဒီ tag တွေကို ဘယ်မှာမဆို မြှုပ်လာနိုင်ချေရှိပါတယ်။ ဥပမာ စားသောက်ဆိုင် menu မှာ သုံးထားမယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံး version က ကိုယ့်ဖုန်းမှာပေါ်လာမှာပါ။ ဒါဆို ကိုယ့်ဖုန်းကို menu နဲ့အနီးဆုံးမှာကပ်ပြီး menu item တွေရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ (အာဟာရပမာဏဘယ်လောက် ပါဝင်ပစ္စည်းစတာတွေ) ကိုပါ ရနိုင်မှာပါ။
ချုပ်ရရင်တော့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၂ခုကြားမှာ ချိတ်ဆက်ဖို့ အမြန်ဆုံးက NFC ဖြစ်ပြီး ဖိုင်တွေကို အလွယ်ကူဆုံးပို့ဖို့ကလည်း NFC ပါပဲ။ ကိုယ့်မှာ 3G, LTE data တွေကုန်သွားတဲ့အခါ Wi-Fi မရှိတဲ့အခါ PC ကိုပို့ဖို့ကြိုးမရှိတဲအခါမျိုးဆို အဖိုးတန်လွန်းလို့ပါ။ NFC နဲ့ဆို မြန်ဆန် လွယ်ကူပြီး ဖုန်း၂လုံးကျောချင်းကပ်လိုက်ရုံနဲ့ ပြီးပြည့်စုံပါပြီ။
အသစ်ထွက်လာမည့် Huawei P20 မော်ဒယ်၃မျိုးထဲမှ တစ်မျိုးတွင် screen Notch လုပ်ဆောင်ချက်ပါနိုင်
Galaxy J2 2018 ပုံရိပ်များ Samsung တရားဝင် website တွင်ထွက်ပေါ်